मोबाइल प्रयोगबाट क्यान्सर हुन सक्छ ?
२०७४ फागुन १३ आइतबार ०९:३९:००
बीबीसी । तपाईँको मोबाइल फोनबाट निस्कने रेडिएशनबाट कति हानी हुन्छ ? के यी रेडिएशनबाट ट्यूमर हुने खतरा छ ? यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? यी प्रश्नहरुमाथि वैज्ञानिक कयौं वर्षबाट अनुसनधान गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्म उनीहरुले सही जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।
बढी फ्रिक्वेन्सीबाट बच्ने तरीकाहरु